तिहारपछिको पहिलो दिन नेप्सेमा उत्साह कायमै : कारोबार रकम करीब ५ अर्ब, परिसूचक २३.३२ अंक वृद्धि
मंसिर ३, काठमाडौं । तिहार पछिको पहिलो कारोबार दिन बुधवार पनि शेयर बजारमा उत्साह कायमै रहेको छ । तिहार अघिको साता निरन्तर बढेर बन्द भएको बजार तिहार पछिको पहिलो दिन पनि २३ दशमलव ३२ अंक बढेर बन्द भएको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक १ हजासर ७४१ दशमलव ८१ विन्दुमा पुगेको हो । बुधवार ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने शून्य दशमलव ८० अंकले घटेर ३३८ दशमलव शून्य ९ विन्दुमा झरेको छ ।
कोरोनाका कारण अन्य आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्थ भएको अवस्थामा नेपालको शेयर बजारले भने नयाँ उचाई कायम गरिरहेको छ । परिसूचकले यस अघिको ऐतिहासिक उचाई १ हजार ८८१ लाई पनि पार गर्ने अनुमान जानकारहरुले लगाएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा शेयर धितोकर्जाको व्याजदर कम भएकाले पनि शेयर बजारमा पछिल्लो समय लगानी बढेको बताईन्छ । यो सँगै लगानीकर्ताहरुको बजारप्रतिको सकारात्मक सोचनै निरन्तर उचाईको कारण रहेको बुझिन्छ ।
गत साता २० अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको बजारमा तिहारपछिको पहिलो कारोबार दिनमै रू. ४ अर्ब ७९ करोड १० लाख ४१ हजारको कारोबार भएको छ । यस दिन १९४ कम्पनीको ४३ हजार ६७३ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड १६ लाख ७४ हजार ८७५ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
बुधवार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । यस कम्पनीको रू. ३३ करोड ६२ लाख ५९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यस अघिको साता सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको यस कम्पनीले यो स्थान बुधवार पनि कायम गरेको हो । यस दिन यो कम्पनीको ३ लाख ३७ हजार ८४४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य बुधवार प्रतिकित्ता रू. ५४ ले बढेर रू. १ हजार ३७ पुगेको छ ।
यस दिन व्यापारिक समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् भने जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । कारोबारमा आएका १२ समूहमध्य बुधवार व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ९ दशमलव ९८ प्रतिशत बढेको छ भने जलविद्युत समूहको सर्वाधिक १ दशमलव २९ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन बैंकिङको शून्य दशमलव १ प्रतिशत र विकास बैंकको शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै होटलको २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ६ दशमलव ९४ प्रतिशत, अन्यको २ दशमलव ३४ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत, जीवन बीमको ५ दशमलव १ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको १ दशमलव ३५ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
बुधवारको कारोबारमा गोर्खाज फाइनान्स र हिमालयन डिष्टिलरीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने विशाल बजार कम्पनी, बोटलर्स नेपाल तराई ,साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र शिवम् सिमेण्ट्सको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
दोहोरो अंकले बढेको बुधवारको बजारमा घलेम्दी हाइड्रो, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, सबैको लघुवित्त, नेपाल हाइड्रो डेभलोपर र सिन्धु विकास बैंकको शेयरमूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।